Indlu enembono entle kaStruer yeLimfjord.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJohan Christian
Indlu ibekwe ngokugqibeleleyo kwithambeka elijongene nefjord kunye neemitha ezingama-300 ukuya kwindawo yabahambi ngeenyawo kunye neevenkile. Yonwabela umoya we-marina okanye iindawo zokutyela ezikwifjord.
Indlu inomgangatho ophantsi kunye nomgangatho we-1. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, igumbi eliluncedo elinesitya sokuhlambela. Kumgangatho wokuqala kukho amagumbi okulala ama-2, indlu yangasese, igumbi lokuhlala kunye nebalcony enkulu ejonge i-fjord.
Thatha eli thuba likhethekileyo lokufumana amava edolophu yaseStruer kunye nefjord ngeyona ndlela ibalaseleyo.
Indawo esembindini embindini Struer kunye umgama omfutshane kakhulu yonke indawo izibuko nobomi afumaneka kwi-Marina ngeli lixa kwiimitha 300 kuphela Struer street ngeenyawo kunye iivenkile, iindawo zokutyela, cafes ubonelela ngamathuba zikulungele ukuhamba iindawo ephakathi kwaye Ngenene qonda esi sixeko sihle.
I-Struer ibekwe kwindawo ebukekayo. Kukho iindlela zokuhamba ngeenyawo kule ndawo kwaye iKilen ijikeleze yindlela entle.
Ulwandle olulungele abantwana lwaseBremdal 1.8km okanye i-Østre beach 2.5km ukusuka endlwini kunye ne-1/2 iyure yokuhamba ukusuka eNorth Sea.
I-Venø, enokubonwa ukusuka endlwini, leyo kunye neyona ndlela imfutshane yenqanawa yaseDenmark kwi-2 min. inikeza indalo entle kunye nendlu yabahambi kunye nekiosk.
I-Hilly landscape yi-Toftum Mountains kunye nolwandle lwase-Humlum yindawo enhle. E-Humlum yiKhosi yeGalufa yaseStruer.
I-Klosterheden Plantage, indawo yesithathu enkulu yehlathi yaseDenmark malunga ne-20 min. Ukuqhuba apho kuneendlela ezilungileyo zokuhamba kwaye apho umntu anokuba nethamsanqa ngokwaneleyo lokujonga iibeavers.
Ukuba ufuna ukuzitotosa, kukho iKurbadet Limfjorden kwizibuko, i-10 min. hamba usuka endlini.
Kwizibuko kukwakho nekhosi yeCable Fun, apho unokuqesha khona iibhodi ze-SUP, iibhodi zokuvuka kwikheyibhile, iiskis zasemanzini, iisuti zokumanzisa kunye nezinye izixhobo. Ixesha lokuvula lisukela malunga. Matshi-Septemba.
Kwisikhululo sezibuko ngokwaso ngokunxulumene nekhosi yeCable Fun, iStruerFun Park iye yasekwa ngexesha lasehlotyeni, apho kukho umqobo omkhulu ovuthekileyo/ikhosi yomsebenzi.
Kwizibuko, kukwakho ne-18 hole adventure mini ibala yegalufa eyasekwa ngoJuni ka-2021.
EBremdal Strand, ulwakhiwo lweNdlu yaseLimfjord luyaqhuba kwaye kulindeleke ukuba lugqitywe ngo-2021. Indlu yaseLimfjord iya kuthi, phakathi kwezinye izinto, hlala i-kayak kunye neklabhu yokukhwela kwaye ube yindawo yeendwendwe zaselwandle.
Ngexesha leenyanga zasebusika, i-ice rink yangaphandle iye yasekwa kwiholo yedolophu kwisitalato sabahambi ngeenyawo.
Xa ubhukisha, ikhonkco kwiiwebhusayithi zibandakanyiwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Johan Christian
UJohan Christian yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Struer